इमानदार नेताको खाँचो- विचार - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक १३, २०७४ वीणा झा
काठमाडौँ — राजनीतिक पार्टी विचार र सिद्धान्तका आधारमा फरक हुन्छन् । तर एउटा बिन्दुमा सबै एक हुनुपर्छ । त्यो हो, ‘देश र जनता’ । तर हामीकहाँ जब सरकार बनाउने र टिकाउने प्रसंग आउँछ, परस्पर विरोधी सिद्धान्त बोकेका पार्टीहरू पनि मिल्छन् । सरकारमा बस्न सकेनन् भने जनताका नाममा ‘ठेकेदारी’ गर्छन् । यो प्राय: सबै स्थापित राजनीतिक पार्टीहरूको चरित्र बनेको छ ।
राजनीतिक पार्टी विचार र सिद्धान्तका आधारमा फरक हुन्छन्। तर एउटा बिन्दुमा सबै एक हुनुपर्छ। त्यो हो, ‘देश र जनता’। तर हामीकहाँ जब सरकार बनाउने र टिकाउने प्रसंग आउँछ, परस्पर विरोधी सिद्धान्त बोकेका पार्टीहरू पनि मिल्छन्। सरकारमा बस्न सकेनन् भने जनताका नाममा ‘ठेकेदारी’ गर्छन्। यो प्राय: सबै स्थापित राजनीतिक पार्टीहरूको चरित्र बनेको छ।
सबै नीतिभन्दा माथि हुन्छ, राजनीति। किनकि यसले सरकार बनाउँछ, कानुन बनाउँछ, कार्यान्वयन गर्छ, अनुगमन तथा नियन्त्रणमा भूमिका खेल्छ। राजनीतिको केन्द्रमा जहिले पनि आम जनता हुन्छ। नेपालका नेताहरू भने कसका लागि राजनीति गर्छन्? पटक–पटक सरकार चलाएका राजनीतिक पार्टीहरूलाई एक–एक गरी केलाएर हेर्दा तिनका कार्यशैली कतैबाट पनि देश र जनता केन्द्रित भेटिँदैन। तिनको ध्यान सधैं सत्तामा टिकिराख्न र भविष्यमा समेत शक्ति आफ्नै हातमा राखिराख्नतिर केन्द्रित देखिन्छ। जवाफदेहिताको कमीले अहिले हरेक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षामा भ्रष्टाचार, बेथिति र अराजकता कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ। बिना झन्झट कुनै किसिमको सेवा पाउन नसकिने अवस्था छ। जनताको दैनिक भोगाइलाई सहज बनाउने प्रयास गर्नुको सट्टा दलहरूले निर्वाचन केन्द्रित गठबन्धन बनाउन, मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
नेपाली जनताले प्रजातन्त्र ल्याएको ३ दशक हुनलाग्यो। प्रजातन्त्र आएपछि जन्मेकाहरूले पनि समानताका लागि लड्नु पर्दैछ, भ्रष्टाचारको विरोध गर्नु पर्दैछ। यस्तो अवस्था किन आयो? दलहरूले कसका लागि राजनीति गरे? दलहरूले विगतका भुलहरू सुधार्दै अघि बढ्ने सम्भावना पनि तत्काल देखिएको छैन। आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि राजनीतिक दलहरूले अघि सार्न खोजिरहेका उम्मेदवारहरूले त्यसलाई छर्लंग पार्छ।
स्थानीय निर्वाचनमार्फत आम नेपालीले स्थानीय सरकार बनाएका छन्। जनप्रतिनिधिले काम थालिसकेका छन्। तर उनीहरूको काम पनि सन्तोषजनक देखिनसकेको छैन। जनप्रतिनिधि गलत पो छानियो कि? छानिएकाहरूको क्षमता विकासमा ध्यान दिइएन कि? ती प्रतिनिधिले चुनावका बेला गरेको वाचा अहिले भुलेजस्तै देखिन्छ। काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले निर्वाचनका बेला प्रस्तुत गरेको १०० दिने कार्यसूची मतदाताले भुलेका छैनन्। काठमाडौंवासीको अहिलेको अपेक्षा धुलोमुक्त, ट्राफिक जामरहित र फोहोर व्यवस्थापन गरिएको सहर हो। स्मार्ट सिटीको सपना बाँडेका शाक्यले मतदाताको सामान्य अपेक्षा पनि पूरा गर्नसकेका छैनन्।
राजनीतिक दलको अदूरदर्शी निर्णय र दम्भले उनीहरूलाई घाटा पुर्‍याउँछ। उनीहरूकै अस्तित्वमा खतरा सिर्जना पनि हुनसक्छ, जसका उदाहरण विश्व राजनीतिमा थुप्रै छन्। त्यसैले नेपालका राजनीतिक दलहरू सुध्रिन जरुरी छ। नागरिकले पनि राजनीतिक दलमात्र हेरेर पुग्दैन। त्यहाँ भित्रका नेता कस्ता छन्, हेर्नुपर्छ। उनीहरूका नैतिकतासँगै विकासका कार्ययोजना र नेतृत्वदायी क्षमता हेर्नुपर्छ। आउँदै गरेको निर्वाचनमा हामीले सही प्रतिनिधि छान्न सकेनौं भने विकास र समृद्धिका हाम्रा सपना अझै टाढिन्छन्, मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिँदै जान्छ। कुनै कार्यालय प्रमुख भ्रष्टाचार विरोधी छन् अर्थात् इमानदार र नेतृत्व गर्नसक्ने क्षमताका छन् भने उक्त कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुने सम्भावना ज्यादै न्यून हुन्छ, उल्लेख्य प्रगति पनि हुनसक्छ। १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ भोगेकालाई अरू उदाहरण चाहिँदैन। त्यसैले अब जो जहाँ छौं, त्यहींबाट आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने बेला भएको छ। ऊर्जावान, नैतिकवान, क्षमतावान र स्वाभिमानी नेता छान्न र त्यसका लागि वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। सही व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
प्रकाशित : कार्तिक १३, २०७४ ०८:१६
फेसबुकबाट ठग्ने पक्राउ
कार्तिक १३, २०७४ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं — बेलायतमा बसोबास गरिरहेको झुटो विवरणसहित फेसबुक एकाउन्टमार्फत पैसा ठगेको आरोपमा प्रहरीले एक भारतीयलाई पक्राउ गरेको छ ।
भारत उत्तरप्रदेशको गोरखपुर घर भई डिल्लीबजार बस्दै आएका ५६ वर्षीय प्रदीपकुमार अग्रवाललाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले आइतबार पक्राउ गरेको हो । प्रहरीका अनुसार उनले नक्कली फेसबुक एकाउन्टमार्फत नेपालीहरूलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउने र उपहार पठाएको भन्दै ठगी गर्थे । मनी ट्रान्सफर र हुन्डीमार्फत उपहार पाउन राजस्व तिर्नुपर्ने बताउँदै रकम असुलीमा संलग्न पवन न्यौपाने र प्रदीप सुब्बा यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन् ।
प्रकाशित : कार्तिक १३, २०७४ ०८:१५